လှကျော်ဇော – ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ကမ္ဘာကြီးသို့ | MoeMaKa Burmese News & Media
၂၀၁၅ ခုနှစ်-စက်တင်ဘာလအတွင်းက ကုလသမဂွ အနှစ်(၇၀) ပြည့်အခမ်းအနားများကို နိုင်ငံ အတော်များက ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ပြီး ကုလသမဂွမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
– ၂၀၃၀-စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းကို အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း (၁၉၃) နဲ့ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီချက်ရဘို့ (၃) နှစ် ကျော် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ကုလသမဂွရာဇ၀င်မှာ ကမ္ဘာနဲ့ချီရှိနေတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုရဲ့ အရင်းခံအကြောင်းများဖြေရှင်းရေး-နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်များရဖို့ အချိန်အတိအကျနဲ့ ပစ်မှတ်များ သတ်မှတ်ဖို့လုပ်ငန်းတွေကို စစ်ဆေးကြည့်ကြပ်ဖို့…. စတာစတာတွေအတွက် အရှည်ကြာဆုံး ဆွေး နွေးရတဲ့ပွဲအဖြစ်သမိုင်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီရည်မှန်းချက်များဟာ သိပ်ကြီးမားကျယ်ပြန့်လွန်းတဲ့ အတွက် တနိုင်ငံထဲကသီးသန့်ထမ်းဆောင်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘဲ တကမ္ဘာလုံးက စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်လို့ ကုလသမဂွကသူ့တာဝန်အဖြစ် သဘောထားပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ညှိနှိုင်းကာ ပိုမိုကောင်း မွန်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက်- တလောကလုံးဆိုင်ရာ တစုတစည်းတည်း ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အသွင်အပြင် တရပ်လုံးပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အမြင်တွေနဲ့ ပြည့်ဝနေတဲ့ စီမံကိန်း… ဆိုတဲ့အမည်ကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့ ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကုလအထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဘန်ကီမွန်းက… ဒီစီမံကိန်းဟာ လူသားများရဲ့ ဆင်းရဲမှုနည်းသဏ္ဍန်ပေါင်းစုံကို အဆုံးသတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု တွေကို မျှဝေခံစားစေရမယ်။ ကမ္ဘာတလွှားငြိမ်းချမ်းစေလိမ့်မယ်။ လိင်ခွဲခြားမှုတွေကိုအဆုံးသတ် စေမှာဖြစ်ပြီး လူသားအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးများကိုအာမခံနိုင်မှာဖြစ်ပြီး တခွန်းထဲပြောရရင်တော့ ဘယ်သူမှနောက်ကျန်မနေစေရပါဘူး … လို့ အဲဒီနေ့ (၂၅-၈-၂၀၁၅) ကပေးတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ပြော သွားပါတယ်။
တကယ်တော့ဒီစီမံကိန်းဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က ကုလသမဂွကပြုလုပ်ခဲ့ ထောင်စုနှစ် ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲမှာ နိုင်ငံပေါင်း(၁၈၇)၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၂၃)တို့က စုပေါင်းရေးဆွဲပြီး သဘောတူအတည်ပြုထားတဲ့ ၂၀၁၅ မှာ အကောင်အထည်ပေါ်ရမဲ့ ထောင်စုနှစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး ရည်မှန်းချက်များ (Millennium Development Goals—MDGs)- အချက်(၈) ချက်ရဲ့ အဆက် ဖြစ် ပါတယ်။
၁။ အလွန်အကျွံ ဆင်းရဲမှုနဲ့ ငတ်မွတ်မှု-ပပျောက်ရေး။
၂။ မူလတန်းပညာရေး-မသင်မနေရ အခမဲ့သင်ကြားနိုင်ရေး။
၃။ အမျိုးသား-အမျိုးသမီးတန်းတူရေးနှင့် အမျိုးသမီးများကို စွမ်းအင်မြှင့်ပေးရေး။
၅။ မိခင်ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ပေးရေး။
၆။ ကူးစက်ရောဂါကြီးများဖြစ်တဲ့ HIV-AIDS- ငှက်ဖျား နှင့် တခြားရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရေး။
၇။ သဘာပတ်ဝန်းကျင် ရေရှည်တည်တန့်ရေးအတွက် အာမခံရေး။
၈။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါ်ထွန်းလာရေး။
ဒီစီမံကိန်းကြီးများအတွက် ပစ်မှတ်တွေ အချိန်ကာလတွေစနစ်တကျရေးဆွဲပြီး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ (ဥပမာ-ကမ္ဘာဘဏ်၊ အနိုင်နိုင်ငံငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့) ကလည်း ပုံသဏ္ဍန်အမျိုးမျိုး (ချေးငွေများ) နဲ့အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြပေမဲ့ ထင်တိုင်းမပေါက်တဲ့နိုင်ငံတွေ အများအပြား ရှိခဲ့ ပါတယ်။ (သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမျိုး၊ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးများ- စသည်) ဒါကြောင့် ဒီသင်ခန်းစာတွေကို နိဂုံးချုပ်ပြီး ၂၀၁၅ မှာ နောက်ထပ်စီမံကိန်းတခု (၂၀၃၀- အတွက် စီမံကိန်း-စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်-(၁၇)ချက် (Sustainable Development Goals-17 SDGs) ကိုချမှတ်လိုက်တာပါ။
၁။ နေရာတကာက သဏ္ဍန်ပေါင်းစုံနဲ့ရှိတဲ့ဆင်းရဲမှုပပျောက်ရေး။(ကုလသတ်မှတ်ချက်-ဆင်းရဲသား တနေ့ (ယနေ့နှုန်း) ဒေါ်လာ၁.၂၅ အောက်ရသူ) လူမှုဖူလုံရေးစနစ်များ ပေါ်ပေါက်လာရေး။
၂။ ငတ်မွတ်မှုပပျောက်ရေး၊ အစားအစာလုံလောက်ရေး၊ အဟာရပြည့်ဝရေး၊ လယ်ယာ ထွက် ကုန်များကောင်းမွန်စွာထွက်ရှိရေးအတွက် လယ်သမားများကို ဘက်စုံက အကူအညီများပေးရေး။
၃။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာရေး။ ဥပမာ-၂၀၃၀ မှာ မိခင်အသေအပျောက်နှုန်းကို လူ တသိန်းမှာ ၇၀ (တကမ္ဘာလုံး) သို့လျှော့ချရေး။ ကူးစက်ရောဂါများကိုအမြစ်ပြတ်အောင် လုပ်ဆောင် ရေး။ မိသားစုစီမံကိန်းအတွက် ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရေး။ လူတိုင်းဆေးကုသခွင့် ကာကွယ်ဆေးများထိုးခွင့် ရရှိရေး။
၄။ ကျားမခွဲခြားမှုမရှိဘဲ၊ လူတိုင်းအရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့ပညာရေးရရှိရေး။ တသက်ပတ်လုံး ဆက် လက်လေ့လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးများရရှိရေး။ ဘ၀အခြေအနေကို အဆက်မပြတ်မြှင့်တင်ရေး အတွက် သင်တန်းပေါင်းစုံတက်နိုင်ရေး။ (အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသင်တန်းများ တက် ရောက်နိုင်ရေး)
၅။ အမျိုးသား-အမျိုးသမီး-တန်းတူရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ မိန်းကလေးများအား စွမ်းအင်မြှင့်ပေး ခြင်း။ အမျိုးသမီးများကိုခွဲခြားဆက်ဆန်မှု။အကြမ်းဖက်မှု။လူကုန်ကူးမှုများပပျောက်ရေး။ အဆင့်အသီးသီးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအတွင်းအမျိုးသမီးများပါဝင်မှုနှုံးမြှုင့်တင်ပေးရေး။ အမျိုးသမီးများရဲ့အခွင့်အရေးများကိုတရားဥပဒေနဲ့ကာကွယ်ပေးခြင်း။
၆။ သန့်ရှင်းသော-သောက်ရေ-သုံးရေရရှိရေး။ ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုက်ညီသောပတ်ဝန်းကျင် ရရှိ ရေး။ (ဥပမာ-လုံခြုံသောရေအိမ်သာ။)
၇။ ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာပြီး သန့်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်ရရှိရေး။
၈။ လူအားလုံးသင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် စီပွားရေးအရ တိုးတက်မှုရှိရေး။
၉။ အခြေခံအဆောက်အအုံများရရှိရေး။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ထွန်းရေး။ တီထွင်ဖန်တီးမှု များကိုအားပေးရေး။
၁၀။ တိုင်းပြည်တွင်းနှင့် တပြည်နှင့်တပြည်အကြား မညီမမျှဖြစ်မှုများကို လျှော့ချရေး။
၁၁။ လူနေရပ်ကွက်များအားလုံး စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိရေး။ အဆင့်အတန်းအဆက်မပြတ် မြှင့်တင် ပေး ရေး။
၁၂။ နေထိုင်စားသောက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးပုံစံများ စဉ်ဆက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းရေး။
၁၃။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲနှင့်၎င်းရဲ့သက်ရောက်မှုများကို ဖြေရှင်းရေးအတွက် အလျှင်အမြန် လုပ် ဆောင်ရေး။
၁၄။ သမုဒ္ဒရာ ပင်လယ်နှင့်ရေအောက် သက်ရှိ သက်မဲ့ အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းရေး။
၁၅။ မြေပေါ်သယံဇာတများ(သဘာဝတောတောင် သစ်တော) ထိန်းသိမ်းရေး။
၁၆။ ငြိမ်းချမ်းရေး တရာမျှတမှုရရှိရေး။ သန်မာထိရောက်တဲ့တာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ ရရှိ ရေး။
၁၇။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တကမ္ဘာလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် များ ခိုင်မာအားကောင်းစေရေး..
ဒါတွေကတော့ ကုလသမဂွကဦးစီးပြီး ၂၀၁၅- စက်တင်ဘာလက ကျင်းပခဲ့တဲ့ ထိပ်သီးများ ညီလာခံကနေ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြတဲ့- ၂၀၃၀ ခုနှစ် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးစီမံကိန်းအတွက် ရည်မှန်းချက်(၁၇)ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီစာတန်းကြီးမှာ ရည်မှန်းချက်(၁၇) ချက်ကို ထပ်မံအသေးစိတ်ပြီး အဆင့်အမျိုးမျိုးခွဲပြီး အချိန်ကာလအလိုက် ပစ်မှတ် (target) ၁၆၃ ခု ခွဲထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာများအတွက် ဖြေရှင်းမဲ့ နည်းလမ်းများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒါတွေအားလုံးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတိုချုပ်လိုက်ရင်တော့…ဆင်းရဲမှု၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု ပပျောက်ဖို့၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေးစနစ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့၊ မြို့ပြလူနေရပ်ကွက်များ သင့်တင့်ကောင်းမွန်ဖို့၊ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့၊ မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာ တ များကို ထိန်းသိမ်းဖို့ …စသည်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကို အစိုးရများ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက တာဝန်ခွဲဝေ လုပ်ဆောင် ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂွအနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးအနှံ့အပြားလက္ခဏာဆောင်လာမှု (globalization) အောက်မှာ နိုင်ငံအားလုံးတဆက်တစပ်ထဲဖြစ်လာနေတာကြောင့် ပြဿနာအားလုံးကို စုပေါင်းဖြေရှင်းကြဖို့ လက်ဦးမှုရှိရှိ ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေဟာ ပကတိဘာဝတရားများသာဖြစ်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံတိုင်းအနေနဲ့ကလည်း မိမိရဲ့အတ္တဘာဝပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ပြည့်ဝ အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကြရပါလိမ့်မယ်။
အစိုးရလုပ်ငန်းများရဲ့ထင်သာမြင်သာရှိမှု တာဝန်ယူ မှုများရှိရမဲ့အပြင် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကလည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။ ပြည်သူလူထုကြီးတရပ် လုံးကလည်း ပါဝင်လှုပ်ရှားရမှာဖြစ်သလို ကြီးကြပ်သူအခန်းကလည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဘက်ပေါင်းစုံက၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်မှုများနဲ့ နိုင်ငံအတော်များများက ပြသာနာများကို ဖြေရှင်းလာနေနိုင်ပါတယ်။
ဗမာပြည်မှာလည်း ဒီလိုမျိုးကုလသမဂွစီမံကိန်းများ ၀င်လာနေတာ ကြားသိနေရပါတယ်။ ဒါတွေအဟောသုကံဖြစ်မကုန်ဘဲ ကုလသမဂွရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်း ပြည်သူလူထုကြီးအတွက် အကျိုးရှိပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။
၂။ Beijing Review.vol.58.no42.15-10-2015.
ပုံအတွက်စာ။ ၂၂–၉-၂၀၁၅ ရက်နေ့ကနယူးယောက်ရှိကုလ ဌာနချုပ်မှာ SDG 17 ကိုရုပ်ပုံများနှင့် ဖော်ပြထားပုံ။